Ny fivarotana Apple any Shina dia hanaiky ny fomba fandoavam-bola any Shina toy ny AliPay | Avy amin'ny mac aho
Amin'ny hetsika maloto ataon'ny orinasa miorina ao Cupertino hanatsarana ny varotra any amin'ny firenena aziatika ary hampihena ny fankahalana mianjady amin'ny orinasa vahiny, Apple dia nanapa-kevitra ny hanaiky ny serivisy malaza Alipay ao amin'ny magazay 41 any Chine.
Momba izany ny fotoana voalohany nandraisan'ny Apple ny fandoavam-bola finday ankoatry ny azy, amin'ny fiezahana hanakaiky kokoa ny mponina eo an-toerana sy hanatsara ny fahatsapan'ny Sinoa ireo vokatra isan-karazany atolotra ao.
Ny vaovao dia nambaran'ny sampana iray an'ny Alibaba, tsena an-tserasera fanta-daza ao amin'ny firenena, izay nanambara omaly fa Alipay Izy io no ho rafitra fandoavam-bola finday tsy misy marika voalohany eken'ny Apple ao amin'ny magazay ara-batana.
Ny serivisy Apple Pay efa ekena dia miaraka amin'ity fomba fandoavam-bola malaza ity, eken'ny maro any amin'ny kaontinanta Azia. Apple Pay dia niparitaka nanerana an'izao tontolo izao, saingy toy ny serivisy hafa an'ny orinasa, any amin'ny firenena aziatika dia tsy mijinja ny tarehimarika andrasana izy ireo, izay no nahatonga ny biraon'ny Cupertino handray izany fanapahan-kevitra izany.
Na dia nanomboka iray taona mahery lasa izay aza i AliPay mba hekena amin'ny fividianana an-tserasera amin'ny tranokalan'i Apple, dingana iray ny fitondrana an'io serivisy io any amin'ireo magazay ara-batana an'ny orinasa. izay tsy misy afa-tsy ny mangoraka bebe kokoa amin'ilay mpanjifa sinoa, izay mbola misalasala mividy vokatra avy any ivelany.
Nandritra ny taona vitsivitsy izao, ny fifandraisana misy eo amin'ny orinasa Amerikana Avaratra sy Alibaba nohamafisina, ka hatramin'ny fahafahan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny serivisy fandoavam-bola, araka ny nohamafisin'ny CEO Tim Apple sy i Cook Jack Ma, ny Alibaba. Na dia latsaka tamin'ny faran'ny 2016 aza izany hevitra izany, ny fifandraisana misy eo amin'ny CEO roa tonta dia tsy ratsy ary ny fifanarahana fiaraha-miasa dia tsy holavina amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple Stores any China dia hanaiky ny fomba fandoavambola tokana an'i Shina, toy ny AliPay